दुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो, आखिर किन यस्तो छाडा कि बाध्यता? (भिडियो सहित) – Cn Chautari
माघ २६, २०७८ बुधबार 642
एजेन्सी । निकै नै सुन्दर एक युवतीको होटेलमा एक विदेशी युवकको साथ रेकर्ड भएको भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ ।ती युवती कुनै होटेलको विस्तारमा युवकसँगै छिन । हिन्दी भाषा प्रयोग गरेका सो युवकले यसरी भिडियो खिचिरहँदा पनि ।
उनि मस्तले केटाकै अँगालोमा बाँधिएर विस्तारामा रमाइरहेकिछिन् । बेला बेला अर्कि नेपाली दिदीलाइ सम्बोधन गर्दै हेर्नु न यस्ले त मलाइ मार्नै लाग्यो भन्दै नेपालीमा बोलिरहेकि छिन् । बाँकी सबै भिडियो आफ् बोल्छ… **भिडियो हेर्न ।
तलको लिन्क खोल्नुहोला**यो पनि हेर्नोसः युटुबमा १ करोड दर्शकले हेर्दा कति कमाइ हुन्छ? काठमाडौं । एक समय थियो, गीत कति हिट र त्यसबाट कति आम्दानी भयो भनेर क्यासेट बिक्रीलाई आधार बनाइन्थ्यो ।
म्युजिक कम्पनीले क्यासेट बिक्री गरेको आधारमा गायक/सर्जकले रोयल्टी पाउँथे । अहिले जमाना फेरिएको छ । गीत हिटको मापन र आम्दानीको मुख्य स्रोत युट्युब बनेको छ । धेरै कलाकारहरुले युट्युब च्यानल खोलेर आफ्ना गीत आफ्नै च्यानलमा अपलोड गर्ने गरेका छन् ।
Prevमर्नु परे मराैला तर MCC मेरो कार्यकाल सम्म पास हुन दिन्न: सभामुख सापकोटा ||
Nextएमसीसी पास गर्नै पर्छ, रोकियो भने १८ देखि ३० बर्षसम्मका सबै युवा वेरोजगार हुन्छन्: पूर्ब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा